हाम्रो माउवादी नेता रुख चिन्हमा उठ्न सक्छन! | परिसंवाद
हाम्रो माउवादी नेता रुख चिन्हमा उठ्न सक्छन!
गफाष्टक	 आइतवार, जेष्ठ १५, २०७९ मा प्रकाशित
मैले जे विश्लेषण गरेको थिए ठ्याक्क त्यही पुग्यो । हाम्रो प्रचन्न काम्रेस लागिसकेपछि असम्भव भन्ने केही हुदैन । यसपालि नेपाली कांम्रेसको काँधमा राखेर माअोवादी केन्द्रलाई मजाले बैतर्नी तारे । अब अाम्ने चुनाउमा अर्कोतिर कोल्टो फेरेर `अाफ्नो हुदो खुदैखुदो´ बनाम्छन । ठाम अन्सार गठबन्धन दलकाहर्लाई पनि प्रचन्नले राम्रो गर्देकाछन् । माअोवादीका काम्रेसहर्ले खोजीखोजी बुट्टोमा भोट हाले । तर, नेपाली कांम्रेसकाले भने हाम्रो अाँसी र हेम्मर खोजेर छाप ठोकेनन् । ललितपुरका हाम्रा उपमेयरका उम्मेदवारलाई कांम्रेसले भोट हाल्दै हालेनन । गठबन्धनका उम्मेदवार मध्य ५/१० ठाममा राम्रो भोट दिए अन्त दिएनन । गठबन्धनबाट महानगरका उपमेयर उठेकाहर्लाई कांम्रेसले नराम्रोसँग हराइ दियो । इटहरी, विराटनगर, काठमाडौं, ललितपुर, बुटवललगायत धेरै स्थानमा गठबन्धनलाई कांम्रेसले थाङ्नामा सुताइ दियो ।
हाम्रो पार्टीको एक मात्र अध्यक्ष काम्रेस प्रचन्नले भरतपुरलाई `फोकस´ गर्नुको पनि खास कारन थियो । यदि भरतपुरमा `त्यो उस्को´ व्यवस्था नगरेको भए एमाले र कांम्रेसले भोट दिने नै थिएनन । १ देखि ८ वडासम्मको भोट गन्दा हाम्रो पार्टीको एकजना पानी सदस्यसमेत जितेन । तर, यता मेयरमा भने एमाले र कांम्रेसले छोरीलाई अत्यधिक मत दिए । मन फुकाएर दिल खोलेर, अाफ्नोलाई नदिएर पनि दिए । यसरी यथेष्ट मत उनार्ले हचुवाको भर्मा दिएकै होइन ! `त्यो उस्को´ कारनले दिएको हो । पोखरा र भरतपुरमा `त्यो उस्को´ छेलोखेलो नबनाको भे दुवै सिट एमालेले सजिलै लाने रैछ । कांम्रेस र एमालेका टाउकेहर्को टाउको गनेर, `कति हो भन´भनेर ठाम्को ठाम गन्दे पछि मात्र चुनाउ सजिलै जितिएको हो । विभिन्न तिकडम अपनाउदा र गठबन्धन हुदा त यो गति छ भने एक्ला एक्लै चुनाउमा गएको भे हाम्रो हालत के हुन्थ्यो ! राम राम राम सोच्न पनि अप्ठ्यारो । एमालेहर्ले हामीलाई माई खोलामा बगार अदुवा खोलामा खोज्ने रान ।
जे होस् पान दले गठबन्धनले कांम्रेस र माउवादीलाई राम्ररी फाइदा पुग्यो । हाम्रो महान काम्रेस प्रचन्नले माधव नेपालको पार्टीलाई पनि राम्रो फाइदा पुराइ दिए । यस्तो राम्रो हुदै गो भने यो गठबन्धन युगौ युग कायम रहन सक्छ । अबको चुनाउमा हाम्रा कतिपय नेताहर्ले अाँसी र हेम्मर फालेर रुख चिन्ह लिएर चुनाउ लड्नु पर्ने हुनसक्छ । पार्टी सार्ट्री मारो गोली, चुनाउ जित्यो भरो झोली । त्यसबेला देउवा दाइले हाम्रो टाउकाको मोल तोक्दा पीडा र अहिले पिठियुँमा बोक्दा अानन्द दुवैको गज्जबको मिश्रण भयो । अहिलेसम्म उभिण्डे खोलाको भङ्गालो बनेर कहिले देउवासँग मिसिन पुगियो कहिले अोलीसँग घुलन भइयो । माउवादीको अस्तित्वमै संकट उत्पन्न हुने भएपछि संकट मोचन गरिदिने कि अोली कि देउवा बाहेक हाम्रो अरु को छर ! यदि यो दुई जनालाई हाम्रो प्रचन्न काम्रेसले कुरैमा भुल्याएर, मुखले ठिक्क पारेर अाफ्नो दुनो नसोझ्याउने हो भने माउवादी भन्नेको नामोनिशान नरहने रैछ ।
नमस्कार है विध्वंसे काका ! हौ काका तिमार्को सकिएको, मकिएको, अस्तित्व समाप्त भएको माउवादी पार्टीलाई पनि हाम्रो देउवा दाइले वैतर्नी तारी दिए । तिमारू जस्तो कृतघ्नलाई मयाँ गर्न चाहिँ नहुने हो तर केगर्नु ! समय परिस्थितिले यसै गर्यो । हामीले गर्दा यो चुनाउमा तिमार्को पनि भाउ बढ्यो । वास्तवमा तिमार्ले लड्डु कोचाकोच गर्नु पर्ने बेला चाहिँ यही हो । कांम्रेसकोबुई चडेर पिंड हसुर्ने भयौ ।
वाइयात कुरो नगर भिरघरे ! यदि गठबन्धन नभेको भा र हाम्रो माउवादीले इमान्दारी पूर्वक भोट नदेको भा तिमार्को चाहिँ पत्तासाफ हुन्थ्यो । अरुको त कुरै छोड्दे भिरघरे ! विराटनगर महानगरपालिका नै माउवादीको भोटले कांग्रेसले जित्यो । अन्तको पनि एमालेसँगको भोटको अन्तर जाँचेर हेर्त ! तिमारू त डङग्रङै उत्तानो चित । हाम्रो कार्जेकर्ता धेरै इमान्दार। गठबन्धनबाट उठेका तिमार्का धेरै ठाममा जिते। गठबन्धनबाट उठेका माधवको, माउवादीको र जसपाको उम्मेदवारलाई भने तिमार्ले पोखरा, भरतपुर, हेटौडा, सिमरा र विरगंजबाहेक अन्त समाप्त पार्दियौ । यदि भरतपुरमा छोरीले नजितेको भए नेपालमा ठूलो संकट अाइलाग्ने थियो । नानी छोरीलाई जिताउनेमा तिमार्को कांम्रेसको केही र सबैभन्दा बढी एमालेको भोट अाए छ । भरतपुर, पोखरा र हेटौडका एमालेहर्लाई धन्यवाद भन्नैपर्छ। अाफ्नालाई हराएर यसरी हाम्रोलाई जिताएकोमा त्यहाँका एमाले नेता धन्यवादका पात्र भए । बेलामा लेनदेन राम्रोसँग भएको उदाहरण प्रष्ट भयो । कि कसो सण्डे !
ठिकै हो काका ! दमकमा राप्रपालाई जिताउने र विराटनगरमा जसपालाई हराउने तिमार्को गठबन्धन टुट्यो भने ककस्को राजनीति समाप्त हुन्छ हेर्नुपर्छ । हाम्रो एमालेलाई हराउन तिमार्को पान दले, छ दले गठबन्धनको धन, बल, छलले नपुगेर राज्यसत्ताको चरम दुरुपयोग भएको थियो । अहिले तिमार्को लागि देउवा दाहिना भएका छन् अर्को पटकसम्म देउवालाई दाहिना राख्न सके कुम्भिपाक नर्क तर्ने साधन बन्न सक्छ । देउवा डेब्रिए भने तिमार्को विलय त्यही कुम्भिपाकमा हुन्छ।
उल्कै गर्यो झिल्के सरकारले!
माधवलाई अालेले पछारे, देउवालाई प्रचन्नले लतारे!
हेप्न खोजे कांग्रेसलाई ठेगाना लगाइ दिन्छु अनि!
हाम्रो पान दल मिलार काम्रेस पार्टी बनाम्नु पर्छ!
अब तैंले भनेर हुन्छ ! हाम्रो प्रचन्नका अगाडि जेमराज पनि थर्कमान हुन्छ । अोली र देउवालाई लठ्ठ लन्ठु बनाउन सक्ने क्षमता प्रचन्नसँग बाहेक अरुसँग छैन । योसँग भएन त्योसँग, त्योसँग भएन योसँग गठबन्धन त हुन्छ हुन्छ । अब विराटनगरको कुरो त्यहाँ हाम्रो माउवादीको कारणले होइन कांम्रेसको कारणले जसपाका उपमेयर उम्मेदवार अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका छोरा हारेका हुन । प्रचन्नकी छोरी जित्ने उपेन्द्रको छोरो हार्ने अर्थमा यसलाई लिनु हुदैन । प्रचन्न भनेको माहिर खेलाडी हो भनेर बुझ्नु पर्छ ।
हौ काका ! यो भन्दा अघिको स्थानीय निकायको चुनाउमा हाम्रो देउवासँग मिलेर प्रचन्नले फाइदा लुटेकै हो, त्यसपछि भएको प्रतिनिधिसभा चुनाउमा अोलीसँग लिपिक्क टाँसिएर देउवाको उछित्तो काढेकै हो । अहिलेको चुनाउमा फेरि देउवा प्रयोग भएकै देखियो । अब ६/७ महिना पछि फेरि चुनाउ हुदै छ त्यो चुनाउसम्ममा माधवको पार्टी प्रचन्नको पार्टीमा विलय भै सक्छ । एउटा पार्टी अर्कोमा विलय भैसकेपछि रह्यो चार दल । जसपा र जनमोर्चाको खासै अर्थ र काम छैन भनेर हाम्रो देउवा दाइ र प्रचन्न काम्रेसले हुत्याई दिन्छन् । रह्यो कांम्रेस र माउवादी । अनि नेपाली कांम्रेसले निर्नय गरेर माउवादीलाई पनि रुख चिन्हमै उठाउनु पर्छ । किन भने हाम्रो कांम्रेसले तिमार्को चिन्हमा भोट हाल्न मानेन, तिमार्को माउवादीले चाहिँ खोजी खोजी र सजिलै रुखमा भोट हाल्न सके । अर्थात माउवादी जे पनि गर्नसक्छ तर कांम्रेस त्यसरी गति छाड्न सक्तैन ।
हौ भिरघरे दाइ ! घर जाने होइन । म त खाना खार तोप्चेतिर जानु छ ।
हो सण्डे भाइले बेलैमा सम्झायो । लौ काका ! हामी उभिण्डे खोला हुदै घरतिर लाग्छौ । अब धेरै सोच्नु पर्दैन । तिमारू पनि कांम्रेसनै भै सक्यो ।
असल समाज निर्माणका लागि सहकार्य आवश्यक छ